विचित्र संसार | Sagarmatha TV
नेपालका नेताहरुले न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेकिण्डाबाट केही सिक्ने कि ?
काठमाडौं- विकसित मुलुकका नेताहरुको जीवनशैली कति सरल हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेकी छिन्- न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जेकिण्डा आर्डेन। अष्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा उनले आफ्नो सामान आफैंले बोकेकी थिइन् । आफ्नो सामान आफैंले बोकेर गाडीमा समेत राखिन् र गाडी हुक्याइन् । त्यो काम गर्न उनलाई न त भरिया चाहियो न त सहयोगी नै । उनयो यो कामको चर्चा […]
कार्यकक्षमा सीईओ आएर नाच्न थालेपछि छायो खुसियाली
अफिसमा कार्यालय प्रमुखसँगै नाच्दै हसिमजाक गर्ने रहर कसलाई हुँदैन र ? आफू मातहतका कर्मचारीसँग यस्तै रमाइलो गर्ने एक कार्यकारी प्रमुखको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । यहाँ हेर्नुहोस भिडियो Rare to seeaCEO dance and have fun in an office setting. That’s the way to createahappy culture @DipaliGoenka #welspun. pic.twitter.com/B6LAd2u3tr […]
१९३ केजीका १० वर्षे बालकले यसरी घटाए वजन
औसतमा १० बर्षको कुनै बालकको तौल कति होला । पक्कै पनि २५/३० किलोग्राम वा बढिमा ३५ केजी सम्म होला । तर विश्वमा एक यस्ता बालक पनि छन् जसको वजन १० बर्षको उमेरमा १ सय ९३ किलोग्राम थियो । त्यति मात्र होइन जहाँ वयस्क मानिसको वजन ६०/७० किलोग्राम हुन्छ ती बालकले आफ्नो शरीरबाट १ सय १० […]
मन्त्री चढ्ने दुई वटा गाडीको नम्बर प्लेट एउटै, तस्वीर भाइरल !
काठमाडौं– सामान्यतया चोरी तथा आपराधिक गिरोहले नम्बर प्लेट फेरेर आपराधिक गतिविधि बढाउने गरेको विषय नौलो होइन । एउटै नम्बर प्लेट भएका सवारी साधान बेला बखत ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको पनि पाइएकै हौ । हालै एउटै नम्बर प्लेट भएको दुई वटा सवारी साधानको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । सरकारी गाडी एउटै नम्बर प्लेटको […]
वैज्ञानिकले भेटे सय वर्षसम्म बाँच्ने दुर्लभ जीव
एजेन्सी । दक्षिण पूर्व युरोपको देश बोस्निाया र हर्जेगोविनामा पानीभित्र भएका ५ गुफामध्ये एकमा एक दुर्लभ स्यालामेन्डर स्थानीय नाम बेबी ड्र्यागन भेटिएको छ । यो पछिल्लो २ हजार ५ सय ६९ दिन ९७ वर्ष भन्दा बढी० समयदेखि हल्लिएको पनि छैन । वैज्ञानिकले लामो समयसम्म निगारानी गरेपछि उक्त जीव ओल्म्स ९प्रोटियस एग्निस० नामको उभयचर स्यालामेन्डर भएको […]
सोमवार, माघ २७, २०७६
श्रीमती अर्कैसँग भागेपछि श्रीमानले पुत्ला बनाएर गरे श्रीमतीको अन्तिम संस्कार, छोराले लगाए आगो
एजेन्सी । भारतमा श्रीमती प्रेमीसँग भाँगेको भन्दै एक जनाले श्रीमतीको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गरेका छन् । भारतको बोकारो जिल्लाको तेलो थाना क्षेत्र निवासी राजिव कुमारले हिन्दु रिति–रिवाज अनुसार श्रीमतीको पुत्ला बनाएर उनको विधिपूर्वक अन्तिम संस्कार गरे । उनका छोराले आफ्नी आमाको पुत्लालाई आगो लगाए । राजिवले अब उनका लागि उनकी श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको छ […]
सार्वजनिक स्थलमा युवतीले केटाहरुको गुप्तांग समाउँदै हिडेपछि…
एजेन्सी । कुनै एउटा सुन्दरी केटीले बाटोमा हिड्दा तपाईको गुप्ताङ्गमा हात छिराउन लाग्यो भने तपाई के गर्नुहुन्छ ? तपाई लाजले भुतुक्कै बन्नु हुन्छ या खुसी बन्नु हुनुहुन्छ होला । सुन्दरीलाई गुप्तांग परीक्षण गराउन दिन पाउँदा केही खुसी देखिन्थे केही भने लाजका कारण आफ्नो अनुहार नदेखाइदिन अनुरोध गरे । एक सुन्दर युवतीले निःशुल्क रुपमा अण्डकोष परिक्षण […]
विश्वकै महँगो चकलेट, मुल्य १ लाख ६० हजार !
चकलेट खान मन नपराउने को होलान र ? चकलेटको स्वादले जो कोहीलाई लोभ्याउने गर्दछ । बजारमा विभन्न स्वाद र रंगमा चकलेट पाइन्छ । चकलेटको गुणस्तर र परिमाण अनुसार त्यसको मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । साधारणतया एक चकलेटको मुल्य एक रुपैयाँदेखि २–४ सयसम्म पर्छ होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, एउटै चकलेटको मूल्य डेढ लाखभन्दा […]
बिहिबार, कार्तिक २१, २०७६
बाँदरको मासु मृगको सुकुटी भन्दै उपहार ?
अहिले चार्डपर्वको सिजन छ । चार्डपर्वको अवसरमा एकअर्काले विभिन्न उपहार आदानप्रदानसहित शुभकामना साटासाट गरिरहेका छन् । शुभकामनासहितको उपहारमा कोशेली के के होला तपाईं अनुमान गर्नुहोस् । तपाईंले गरेको अनुमान सही नहुनसक्छ । किनकी उपहारका लागि आफूले पाएको सामग्रीको वास्तविकता थाहा पाएर व्यापारी तथा उच्च घरनाका व्यक्ति चकित भएका छन् । काठमाडौंको असनमा माछा बेच्दै आएका […]
पिसाब बेचौँ, पैसा कमाउँ
म्याग्दी । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाले नेपालमा नै पहिलोपटक मानव मूत्र (पिसाब) बेचेर पैसा कमाउने अभियान शुरु गरेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले अभियानलाई सफल बनाउन गाउँपालिकाका सबै वडाका विद्यालय, सार्वजनिक स्थान र घरमा शौचालयमा राख्नका लागि जर्किन वितरण गरी त्यसमा नै पिसाब गर्ने र सोही पिसाब खेतबारीमा लगाइएको बालीनालीमा प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने नयाँ तरिका अपनाएको […]
बुधबार, अशोज २९, २०७६